Shiinaha Caravan mover batari LAXpower-1230 12V 30Ah LiFePO4 baakid batari leh xeedho lagu dhex-dhisay iyo Soo-saaraha SOC iyo Soo-saaraha | LIAO
1. Sanduuqa ABS 12V 30Ah LiFePO4 baakid batari loogu talagalay mooryaan dhaqaajiyaha.
2. Awood xad dhaaf ah iyo culeys fudud oo xad dhaaf ah.
Qaabka Lambar LAXpower-1230
Ugu badnaan socda joogto ah 100A
Waqti xaadirkan 200A
Xilliga ugu sarreysa 300A
Ugu badnaan ku shubista hadda 2C
Danab Amraya 14.6V
Amraya hadda 4A
AC gelinta 100-240V
Heerkulka keydinta -10 ° C ~ 45 ° C
Nolosha wareega (80% DOD) ＞2000 jeer
Fasalka IP IP21
Cabbir 150mm * 275mm * 120mm
Codsiga Dhaqaaqa caravan, korontada.
3. Isticmaal xoog leh oo dheer iyo nabadgelyada ugu badan.
4. Xeedho lagu dhisay iyo heerka is-dischareg-ka oo hooseeya.
5. Nolol dheer oo nad ah waxqabad muuqda.
6. Qaas ah oo loogu talagalay guuritaanka safarka.
7. Badeecadani waxay caan ku tahay suuqa Midowga Yurub muddo sannado ah.
Halbeegyada iyo Codsiga
Hangzhou LIAO waa soosaar xirfadle ah oo loo yaqaan 'prismatic LiFePO'4Unugyada Lithium. Baakadaha batteriga waxaa lagu soo ururiyey iyadoo la isticmaalayo unugyadan. Jid khafiif ah ayaa loo xushay LAXpower-1230 halkaas oo unugyada, xeedho iyo maaraynta batteriga lagu daray 1 shey.
Ujeedada baterigan miisaanka yar ayaa ah bixinta xal raaxo leh oo loogu talagalay isticmaalaha mootada gawaarida xamuulka xaddidan leh ee 30 Ah iyo miisaan aad u kooban. Batarigaani wuxuu awood u leeyahay inuu soo gudbiyo mowjado sare, waa miisaanka fudud oo sidaas darteed aad ugu habboon ujeedadan.
Batarigu wuxuu leeyahay in kabadan oo ku filan oo ku filan si uu u fuliyo hal talaabo dhaqdhaqaaqa safarka. Dhaqaaqa waxaa loo isticmaali karaa ilaa 50 daqiiqo inta lagu gudajiro isticmaalka culus (35 A joogto ah). Isticmaalka xad dhaafka ah (100 A) dhaqaajiyaha waxaa loo isticmaali karaa ugu yaraan 18 daqiiqo.
Haddii la sameeyo muddo dheer batteriga si otomaatig ah ayuu u deminayaa oo wuxuu u baahan doonaa inuu dib isu qabsado. Maxaa yeelay batteriga waxaa laga sameeyaa Lithium LiFePO4kiimikada, waxaa suurtagal ah in gebi ahaanba laga saaro batteriga si ka duwan baytariyada aashitada leedhka. Marka batterigu faaruq noqdo isagaa is deminaya ka dibna wuxuu u baahan doonaa in dib loogu soo celiyo isticmaalka xiga. Amraya waxay ku dhacdaa iyada oo loo marayo fiilada xarkaha illaa isku xidhka khadka.
Hore: SOC iyo gacanka waxaa kujiray baako batari 36V 40Ah LiFePO4 oo loogu talagalay mootada korantada / mootada / gawaarida gawaarida
Xiga: Awoodda sifiican u bixitaanka waxqabadka 12V 130Ah LiFePO4 baakidh batari oo loogu talagalay guriga mootada iyo karavan
Xeedho lagu rakibay Culeys Fudud oo xoog weyn 12V 12Ah LiFePO4 baakid batari loogu talagalay mooryaan dhaqaajiyaha